Izindaba - Inkampani yaseJiafeng: Imikhiqizo ye-RPET izoba umkhuba wokuthuthukiswa okusimeme kwezinto zokwakha ngokuzayo.
Inkampani yeJiafeng: Imikhiqizo ye-RPET izoba umkhuba wokuthuthukiswa okusimeme kwezinto zokwakha ngokuzayo.
Manje kuyaphuthuma ukuvikela imvelo.Iimboni eziningi ziyaqaphela ukubaluleka kokujikeleza kwe-ecof Friendly futhi zihlanganyele ku-RPET futhi zinikele emhlabeni ekuvikelweni kwemvelo. eyenziwe ngamabhodlela epulasitiki asetshenzisiwe kabusha ahlanganisa izindwangu zendwangu zohlobo olusha lokuvikelwa kwemvelo okuluhlaza, umthombo wayo ophansi wekhabhoni, wakhe umqondo omusha emkhakheni wokuvuselelwa.
Ngombono wentuthuko esimeme, manje sekusetshenziswa izinto eziningi ezonga imvelo ezindaweni ezahlukahlukene lapha: ukotini welineni ephilayo noma yemvelo kujwayelekile yonke indawo, izinto ze-RPET zisendleleni, ngenkathi i-EVA eyenziwe kabusha noma i-TPU eyenziwe kabusha izobe isetshenziswa ukuthambekela okusha. Kusungulwa futhi kusetshenziswe izinto ezintsha zezintambo zezitshalo ezifana nendwangu uphayinaphu kanye nendwangu kabhanana.
UJiafeng banconywa ukuthi baphikelele emoyeni "wokuthembeka, ukwethembeka, ukubambisana kanye nokuhlomulisana", kepha bengalimazi imvelo.
Color umbala we-Tyvek atla）
I-Jiafeng igcizelela njalo ukuthi ukusetshenziswa kwemikhiqizo yezemvelo kuyizindlela eziwusizo zomhlaba.Lesi sikhwama se-RPET asihlangabezani nje kuphela nezidingo zemvelo nezinga eliphakeme, kepha lifanele abantu abaningi, elisebenzayo nemfashini.
I-Jiafeng nayo inezinye izinhlobo zezikhwama ezinezixhobo ezahlukene ze-eco-friendly.Njenge-fiber yesitshalo, ukotini ongaphinde ubuye, utshani bephepha, iphepha leTyvek, iphepha lokwakhiwa, i-TPU ebolayo kanye nokunye Zonke izinto zingaguqula isikhwama semilingo nesihlukile.
1, uphayinaphu isikhwama selineni
2, isikhwama sikakotini Esivuselelekayo
3, Paper isikhwama utshani
4, isikhwama sephepha seTyvek
5, Kraft isikhwama sephepha
6, Phinda usebenzise i-EVA
7, Ezinye izikhwama ze-RPET
Uma kuqhathaniswa nekotoni ye-PET polyester yendabuko, i-RPET ayigcini nje ngokugqamisa isitayela sezitshalo ze-PET kepha nezinzuzo zezindwangu zikakotini.